Ayub Ogada – Kothbiro … အာဖရိကန်, Music … | portal │ပညာရှင် Hans Kottke
« ရေဒီယို Okerwelle အပေါ်ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ: ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာမူဝါဒ …
Animation ရဲ့: ဒုက္ခသည်မုန်းတီးမှုဆန့်ကျင်ငါးခုဖြစ်ရပ်မှန်များ … »
Tags:: တောင်, Ayub Ogada, Kothbiro, Musik
This entry was posted on Saturday, August 22nd, 2015 တွင် 14:37 ပညာရှင် Hans Kottke ကအောက်မှာတင်သွင်းသည် 2015, ယေဘုယျ, အတတ်ပညာ. သင်ကတဆင့်ဒီ entry ဆိုတုံ့ပြန်မှုလိုကျလြှောကျနိုငျ RSS ကို 2.0 အစာ. သင်လုပ်နိုင်သည် တစ်ဦးတုန့်ပြန်ထွက်သွား, သို့မဟုတ် trackback သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် site တစ်ခုကနေ.
Wed Jul 17th 15:25:29 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန် 2019